Archive du 20190326
Fametrahana fitondrana tsara tantana Goavana ny andraikitry ny mpanara-maso ny asa
Nosokafan’ny praiminisitra Ntsay Christian tamin’ny fomba ofisialy tany Toamasina omaly ny fihaonambem-pirenen’ireo mpanara-maso ny asa sy ny lalàna sosialy.
Mpanohana kandida depiote maromaro ao Moramanga Nandefa taratasy misokatra ho an’ny filoham-pirenena
Andriamatoa filoha, mahavelom-panontaniana ny maro aty amin’ny Distrikan’i Moramanga izao toe-draharaha manodidina ny filatsahan-kofidiana ho solombavambahoaka izao,
Kandida depiote Bodo Nijery ifotony ny marary ny mponina
Nitafa tamin’ny mponina teny Andravoahangy Atsinanana ny kandida depioten’ny antoko Tiako I Madagasikara ao amin’ny Boriborintany faha-3 eto Antananarivo Rtoa Razafindrazaka Bodoharisoa na Bodo omaly.
Andry Rajoelina Hanaraka ny dian-dRajaonarimampianina…
Toerana 151 no hiadiana etsy amin’ny antenimieram-pirenena eny Tsimbazaza. Raha ny lalàmpanorenan’ny Repoblika faha-4,
Fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana Mampahazo aina ny rehetra…
Niteraka resa-be nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ny lalàna mifehy ny fampielezan-kevitra. Tsy mipetraka mazava ny lalàna mikasika azy io raha ny eto Madagasikara no resahina.
Mpikambana HAFARI Nitory ilay karana nampiditra am-ponja ny filohany
Tsy hanaiky hatramin’ny farany ireo mpikambana eo anivon’ny HAFARI Malagasy.
Mbola olana goavana eto amintsika ankehitriny ny fanovana toe-tsaina hahafahana mivoatra. Tafiditra ao anatin’izany ny fanomezana fahefana ny sefom-pokontany izay tsy tokony hokaramaina 20.000 Ar
Fanakorontanana fanjakana amin’ny grevy Miala any ny paikady hisorohana azy
Hanova fiasa tanteraka ny mpitondra fanjakana hifehezana ny fampizorana ara-dalàna ny fitantanan-draharaha sahaniny.
Volley-Ball Tompondakan’i Afrika 2019 Nomen’ny filoham-pirenena 150 tapitrisa ariary ny GNVB
Noraisin’ny filoham-pirenena Malagasy teny Ambohitsorohitra omaly alatsinainy 25 martsa 2019 ny ekipan’ny GNVB volley-ball izay efa in-3
Raha madio tokoa !
Azon’ilay antoko iray mila mandresy amin’ny lalao miverina ambongadiny io fifidianana io, hoy ny vazivazy zaritenany ao amin’ny tambajotran-tserasera izay raha madio ny fifidianana.
Tahirim-bola vahiny Tsy maintsy atao tsara tantana
Anisan’ny tanjon’ny Banky Foiben’i Madagasikara (BFM) ny fampiakarana ny tahirim-bola vahiny sady andraikitra mivantana sahaniny mihitsy.
Fandefasana mpiasa an-tsokosoko any ivelany Betsaka ireo efa nampidirina am-ponja
Tsy mipetra-potsiny intsony ny polisim-pirenena taorian’ny nisian’ireo olona maromaro tratra nandefa mpiasa Malagasy an-tsokosoko tany ivelany, indrindra fa tany amin’ireo tany arabo.
MSF Ambohitrolomahitsy Olana ny jiro tsy hahafahana mampiasa “internet”
Ny taona 2006 no nijoro ny MSF (Maison de savoir et de la Francophonie) ao Ambohitrolomahitsy, kaominina Ambohitrolomahitsy, distrikan’i Manjakandriana.